प्रकाशित मितिः फाल्गुन, 5, 2076
पहिलो किताब संवाददाता
इटहरी / श्रीशाके १९४१ नेपाल सम्वत ११४० शिशिर ऋतु वि.सं. २०७६ फाल्गुण ५ गते सोमबार तद्अनुसार सन् २०२० फरवरी १७ तारिख फाल्गुण कृष्णपक्ष नवमी तिथि अनुराधा नक्षत्र ९ः२४ पर ज्येष्ठा नक्षत्र व्याघ्यात् योग तैतिल करण ७ः३० पर भद्रा करण आनन्दादिमा मानस योग चन्द्रमा वृश्चिक राशिमा भ्रमणशील रहनेछ । काठमाडौंमा सूर्योदय बिहान ६ः४२ मा भयो र सूर्यास्त साँझ १७ः५५ मा हुनेछ ।
मेष – स्वास्थ्य र नियमकानूनलाई ध्यानमा राख्नुपर्ला । खेलकूद भ्रमणमा आकर्षण बढ्नेछ । हास–विलासमा रुचि बढ्ला । मान सम्मानमा ध्यान राख्नुपर्ला । घरपरिवारको स्थिति अनुकूलै रहला । यात्रामा सफलता मिल्नेछ । विकासको बाटो देखापर्ला । सुख–सुविधाको वस्तुमा खर्च बढ्नेछ । लोभलालचमा नपर्दा उचित रहला । योजना र बजेट बनाइ काम गर्नु बेस रहला । भूलचुक गरेमा भोलि पछुतोमा पर्नुपर्नेछ । लापरवाही नगर्दा बेस रहला ।
बृष – अन्न धन बढ्ला । मिठो भोजन मिल्नेछ । आयस्रोत बढ्नेछ । आर्थिक क्षेत्रमा सफलता मिल्नेछ । उधारो लगानी लगाइएको धन उठ्नेछ । रोकिएको काम बन्नेछ र नयाँ कार्यमा पनि सफलता पाउनुहुनेछ । विकासको पथ बलियो बन्नेछ । व्यापारिक क्षेत्रमा नयाँ–नयाँ सफलता मिल्नेछ । पारिवारिक सुखशान्ति पनि प्राप्त होला । आफन्तको सहयोग समर्थन मिल्नेछ । समयले साथ दिनेछ । विजयश्री प्राप्त होला । सुख(सुविधाको बस्तु बढ्नेछ । हरेक प्रकारले उत्थान होला ।
मिथुन – नयाँ–नयाँ सफलता मिल्नेछ । साहसिक क्षेत्रसित सम्बन्धित काम बन्ला । मान महत्व धन–सम्पत्ति सुख–समृद्धि बढ्नेछ । विजयश्री मिल्नुको साथै वर्चस्व पनि बढ्ला । आफन्तको सहयोग समर्थन मिल्ला । पारिवारिक विकाससँगै कार्यक्षेत्रमा पनि सफल रहनुहुनेछ । दायित्वलाई पूरा गर्नुसँगै नयाँ दायित्वको पनि प्राप्ति होला । रोकिएको कार्य बनेर मन प्रशन्न हुनेछ ।
कर्कट – ग्रहगोचर भाग्यवद्र्धक छ । इष्टमित्र सन्तान सुख बढ्नेछ । शुभ कार्यमा सफलता मिल्नुसँगै विकासको काम पनि बन्नेछ । बौद्धिक र रचनात्मक काममा रुचि बढ्नुसँगै यात्रामा पनि सफलता पाउनुहुनेछ । मान सम्मान बढ्नुको साथै ख्याति पनि फैलिने छ । आरोग्यता बढ्नेछ । विकासको नयाँ नयाँ बाटो देखा पर्ला । सुख–शान्ति बढ्नेछ । हरेक प्रकारले कल्याणले बाटोमा लागिपर्नुहुनेछ ।
सिंह – कुनै प्रकारको जोखिममा नलाग्दा उचित हुनेछ । स्वास्थयमा सचेत रहनुपर्ला । नियम–कानुनलाई उपेक्षा गर्नु उचित हुनेछैन । योजना र बजेट बनाई कार्य गर्नु बेस रहला । उच्चाधिकारीहरूसँगको व्यवहारमा नम्रता राख्नु बेस रहला । चोरी ठगी विश्वासघातीप्रति सचेत रहनुपर्नेछ । विवाद आदिप्रति सचेत रहनुपर्नेछ । भागदौड व्यस्तता चलिरहनेछ ।
कन्या – सुख–समृद्धि धन यश बढ्नेछ । आरोग्यता बढ्नुको साथै नयाँ कार्यमा पनि सफलता मिल्ने देखिन्छ । साझेदारीको कार्य बन्नुको साथै नयाँ–नयाँ कार्यमा पनि प्रगतिको बाटो बलियो बन्ने छ । जीवनसाथीको सुख सहयोग पाउनुहुनेछ । रस रागमा आकर्षण गर्नेछ । मिठो भोजन पाउनुहुनेछ । मान प्रशंसा होला । ख्याति फैलिनेछ । सुख–शान्ति बढ्ला । यात्रामा सफलता मिल्नेछ । लेखन–प्रकाशनसित सम्बन्धित काम बन्नेछ ।
तुला – ऋण रोग र शत्रुसित लड्ने प्रतिरोधात्मक क्षमता बलियो बन्ने छ । आफन्तको सहयोग मिल्नुको साथै शत्रुलाई पनि जित्नुहुनेछ । रोकिएको काम बन्नेछ र नयाँ कार्यमा पनि सफलता पाउनुहुनेछ । विजयश्री मिल्नुको साथै सुख–समृद्धि पनि बढ्नेछ । आलस नगरी समयबाट बढीभन्दा बढी फाइदा लिनुहोस् । घरपरिवारको स्थितीमा सुधार हुनुको साथै कार्य व्यापारमा पनि सफलता पाउनुहुनेछ । मान महत्व पुरस्कार पाउनु हुनेछ ।
वृश्चिक – आजको समय प्रेमको क्षेत्रमा सफलता पाउनको लागि अत्यन्तै अनुकूल छ । मिठो भोजन मिल्नेछ । आरोग्यता बढ्ला । इष्टमित्र सन्तान आदिद्वारा सहयोग मिल्नेछ । कला साहित्य संगीत गीत रसरागसित सम्बन्धित कार्यमा सफल रहनुहुनेछ । रचनात्मक र कलात्मक कार्यमा सफलताको साथै साथीभाइबीच आमोदप्रमोदमा हुनेछ । आनन्द बढ्नेछ । सुख शान्तिमा बृद्धि होला । प्रेमपात्रको साथ पाइनेछ ।
धनु – देखापरेको समस्याको समाधान मिल्नेछ । खर्च बढ्नेछ । यात्रा हुनेछ । भागदौड र व्यस्तता बढ्नेछ । अरूको भरमा बस्नु उचित हुनेछैन । आफ्नै बलविवेकले काम गर्नु बेस रहला । विवाद आदिमा पार्नु उचित हुनेछैन । ठूलो रकमको लगानीको सम्बन्धमा महत्वपूर्ण कागजपत्र माथि हस्ताक्षर गर्दा सचेत रहनुपर्नेछ । आँखा चिम्लेर अरुमाथि भर पर्नु उचित हुनेछैन ।
मकर – विकासको नयाँ सम्भावना देखापर्नेछ । आशा उत्साह बढ्नेछ । आयस्रोत बढ्ला । लगानी उठ्नेछ । यात्रामा सफलता मिल्ला । लेखन प्रकाशनसित सम्बन्धित काम बन्नेछ । इष्टमित्रको सहयोग मिल्नेछ । नयाँ नयाँ काम बन्ला । मान महत्व वर्चस्व पर्नेछ । बौद्धिक र रचनात्मक काम बन्नुको साथै सुख शान्ति बढ्नेछ । अन्नधन बढ्नेछ ।
कुम्भ – बोली र व्यक्तित्वको प्रभाव बलियो बन्ने छ । दायित्वलाई पूरा गर्नु हुनेछ । यश वर्चश्व बढ्ला । भोजभतेरमा भाग लिनुहुनेछ । आर्थिक वार्तामा सफलता पाउनुहुनेछ । सभा र समारोहमा मान पुरस्कारको प्राप्ति होला । दरिद्री भागेर आर्थिक उत्थानको बाटो देखापर्ला । उच्चाधिकारीको साथ मिल्नेछ । आफन्तको सहयोग समर्थन मिल्नेछ । गौरव बढ्नेछ ।
मीन – आरोग्यता बढ्नेछ । शुभ र भाग्यवर्द्धक काम बन्नेछ । मिठो भोजन पाउनुहुनेछ । कार्य व्यापारमा पनि प्रगति होला । रोग र शत्रुसित लड्ने क्षमता बढ्नेछ । आर्थिक पक्ष बलियो बन्ने छ । विजय पथमा अग्रसर रहिरहनुहुनेछ । सफलता र समृद्धिले पाइला चुम्नेछ । यात्रा होला । रसरागमा प्रवृत्ति बढ्नेछ । ख्याति फैलिनेछ ।
उदयपुर सिमेन्ट उद्योगबाट दैनिक तीन करोडको उत्पादन
चैत्र, 11, 2075
गाईघाट / डेढ वर्षदेखि सिमेन्ट उत्पादनमा फड्को मार�... ... ...
जनप्रतिनिधिको गाडी किन्ने बजेटले सार्वजनक बस किन्दै लिङचुङबुङ गाउँपालिका
चैत्र, 4, 2075
गाईघाट / स्थानीयतहका जनप्रतिनिधिले पहिला आफ्नै ल�... ... ...
फेरी घाटामा गयो उदयपुर सिमेन्ट उद्योग
माघ, 23, 2075
गाईघाट / केही समयदेखि नाफामा जान थालेको देशकै सबैभ... ... ...
उदयपुरमा ६ वर्षीया बालिका बलात्कार गर्ने ४५ बर्षिय विक पक्राउ
माघ, 19, 2075
उदयपुर / ६ वर्षीया बालिकालाई जबरजस्ती करणी गरेको आ... ... ...
उदयपुरबाट एक किलो गाँजासहित युवक पक्राउ
पुष, 27, 2075
उदयपुर / उदयपुरबाट १ केजी गाँजासहित प्रहरीले एक यु... ... ...
इजरायलका प्रधानमन्त्री सेल्फ-आइसोलेसनमा
एउटा सिपाही कठिन युद्ध लडिरहेको छ............
सीमामा अलपत्र परेकालाई नेपाल आउन दिने निर्णय, १४ दिन अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने
इन्टर मिलानमाथि लाजियोको कमब्याक जित : युभेन्टसलाई फाइदा !
गेष्टहाउस सञ्चालकसहित ५७ पक्राउ
मुहार हेर्न अभिभावक आतुर
कालापानी जाँदै रक्षामन्त्री
कांग्रेसले भन्यो, शालिन प्रतिपक्ष हुँदा पनि केही गरेन सरकारले
हजार रुपियाँको लगानी दस वर्षमा करोडपति
वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहको डेढ दशक : बढ्यो व्यापार बढेन पूर्वाधार
समितिलाई नै टेर्दैनन् समस्याग्रस्त सहकारी
विप्रेषणमा झिनो वृद्धि
खाद्य वस्तुको मूल्यवृद्धि १० प्रतिशत नाघ्यो